Tantara an’onjam-peo - Tsy mahaleo ny sarany ny vidiny!
Am-polo taona maro dia ny “Sary indray mipika”’ny Radio Madagasikara no mitana ny laharana voalohany teo amin’ny mpihaino. Amin’izao vanim-potoana izao anefa, dia ny tantara no maka izany filaharana izany. Ao anatin’ny herinandro, dia misy hatrany ny tantara an’onjam-peo, ka ao ny mitohy isan’andro, ny tantara indray na indroa miseho.
Samy manana ny fandaharam-potoanany araka izany ny mpihaino, ary tsy anavahana na zaza, tanora, lehibe, eny fa na dia ireo efa nahazo taona aza. Ireo mpanoratra rahateo efa maharaka ireo horonan-tsary malaza any ivelany any, ka afaka mampiaina izany ny mpihaino. Ao ohatra ireo tantaram-pitiavana, mampalahelo, mahatsikaiky. Tsy latsa- danja amin’izany koa anefa ireo tantara mampangitakitaka, mampatahotra, ary indrindra ny tantara foronina na “fiction”. Fa ankoatra izay, dia be mpankafy ihany koa ny tantara fanabeazana sy fanentanana, izay iarahana amin’ireo mpamatsy vola avy any ivelany. Ao ambadik’izany fahafinaretan’ny sofina izany anefa, dia mbola sarotra ny dingana lalovana vao afaka miaina izany ny mpihaino ireny tantara ireny.
Tsy mahasahana ny famoronana ny sarany
Araka ny nambaran’ny mpanoratra iray izay nitafa taminay, dia mandany eo amin’ny telo ka hatramin’ny herinandro eo ny fanoratana tantara iray, indraindray aza dia any amin’ny tapa-bolana any mihitsy rehefa tena tsy misy ny ainga-panahy. “Rehefa tena ao anaty ny aingam-panahy dia na ataoko aza hoe iray andro dia efa mahasoratra tantara iray. Izaho izao efa nahasoratra tantara iray tao anatin’ny iray andro monja, nefa koa efa nisy amam-bolana tsy vita sady tsy hita hoe entina mankaiza ity tantara ity”, hoy Holiravaka Rakotoarisaona, mpanoratra . Tantara izay manodidina ny 20 pejy ary lalaovina ao anatin’ny adiny iray. Fotoana sy ron-doha anefa izay sandaina manodidina ny 25 000 ka hatramin’ny 100 000 ariary arakaraka ny fahefa-mividin’ny onjam-peo tsirairay. Ary raha any amin’ny famerenana kosa dia ny an-tsasabidy no efain’izy ireo. Ankoatra izany anefa, ny tantara efa lafo, dia fananan’ny onjam-peo mandritra ny roa taona, ary tsy hananan’ny tompony fahefana ny mampiasa azy. Na dia izany aza anefa dia iraisan’izy ireo ny fahafaham-pon’ny mpihaino. “Fialam-boly ny tantara amin’ny onjam-peo, fa tsy natao itadiavam-bola ary tsy mahavelona ihany koa. Matetika aza ny ampahany betsaka amin’ny vola raisina dia lany amin’ny fanoratana ny tantara iray ho sora- milina. Tombony kosa ny traikefa na amin’ny fanoratana, na amin’ny fanatontosana, na amin’ny filalaovana, ka any aoriana any, mety ho afaka mamokatra ho anay manokana izahay”.